केटिले केटि संगै बिहे गरे भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ , यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/केटिले केटि संगै बिहे गरे भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ , यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित)
केही दिन अघि काठमाडौमा केटा र केटाबीचको विवाहको निकै चर्चा भएको थियो । अहिले फेरी दुई युवतीबीचको विवाह पनि सार्वजनिक भएको छ । दुई युवती मध्य एक जना श्रीमान र अर्को श्रीमती बनेका छन् । श्रीमान बनेकी युवतीको हाउभाउ भने केटा मानिसको जस्तै छ ।
हाम्रो समाजमा सम लिंगी बीचको विवाह पनि सामान्य बन्न थालेको छ । यि जोडी पनि भर्खर विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । एक जनाको नाम रविना केसी र ममता केसी(खड्का) हो । गोर्खाका उनीहरुले विवाह पछि ममताले आफ्नो थर पनि परिवर्तन गरेर खड्कावाट केसी भएकी छन् । उनीहरु अध्ययनको शिलसिलामा संगै बस्थे ।
त्यती बेला उनीहरुबीच त्यस्तो योजना केही थिइन । दुवै जनाले एउटै केटासंग विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए । तर दुवै जना एक अर्कासंग छुट्टीएर बस्न नसक्ने भएपछि विवाह गरेर संगै बस्ने निर्णय गरे । दुई जनाले तीन साता अघि नजिकैको मन्दिरमा गएर विवाह गरेका हुन् ।
आफ्ना साथीहरुले पनि दुई जनाको सम्बन्ध स्वीकार गरेको बताएका छन् । दुवै जनाको परिवारवाट पनि स्वीकार गरेका कारण पनि कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । उनीहरु एउटै गाउँ र छिमेककै भएका कारण ५ कक्षा देखि नै संगै खेले हुर्केको बताएका छन् ।
त्यसैले पनि उनीहरुले एक अर्कालाई छोड्न नसकेकाले विवाह नै गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुको केही समय केटासंग प्रेम भएपनि दुवैको ब्रेकअप भएपछि संगै बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफुहरुलाई पुरुषको शरिर नचाहिएको बताएका छन् ।
महानायक राजेश हमालले दोश्रो विवाह गरेपछि ……. काे हुन् युबती(भिडियो हेर्नुस)
बंगालि महिलासग लागेर श्रिमान भारतमै लुके,घिसारेर नेपाल ल्याउने सन्तोषको चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
गाउँमै आउछ बा,घ, हामी कसरी सुर,क्षित छौँ ? आमा गु-माएपछि आफन्तहरु यसरी ग,र्जिए हेर्नुहोस्